SomaliaReport: 10 Askari oo Al Shabaab ka soo Goosatay
Mas’uul sare ayaa sheegay in 10 ka tirsanayd malayshiyada mayalka adage e Al Shabaab ay soo goosteen kuna soo biireen ciidamada dawladda taabacsan ee ku sugan magaalada xuduudda Kenya ku taal ee Dhoobleey.
Hoggaamiyaha Raaskaamboonida ayaa subaxnimadii khamiista 10 kan nin si diiran ugu soo dhaweeyey xeradiisa Milatari oo ku taala koonfurta Soomaaliya.
C/fataax Faarax oo ah abaanduulaha ciidanka Raaskaambooniyiinta ayaa ku yidhi wargayska Somalia Report “askartani waxay ka diideen Al Shabaab inay ka xayuubiyaan xuquuqdooda isla markaana ay la dagaalamaan walaalahooda kale ee Soomaaliyeed”.
Wuxu kaloo yidhi “Waxaan ugu baaqaynaa Soomaalida kale, gaar ahaan kuwo ku nool magaalada Dhoobley iyo nawaaxigeedaba inay hubka qaataan oo ay ku soo biiraan dagaalkan lagaga soo horjeedo fallaagadan” wuxuuna intaa si raaciyey “Waxa ka socda magaalada Muqdisho ma aha Jihaad xaq ah ee waa wax ka badan arimo diimeed”. Hoggaamiyaha ciidamadan ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo dadka deegaankuba inay maal-galiyaan oo ay hubka u iibiyaan ciidamada dawladda taabacsan.
“Qorshaha noo dajisan ma aha inaan weeraro ku nahay Al Shabaab, waxaan ku sii jeednaa sugidda amniga ee deegaamadeena. Haddiise ay dhacdo in la ina soo weeraro, waa inaan is difaacno” ayuu yidhi C/fataax.
Dagaalyahano dhawr ah oo ka kala tirsan malayshiyada Al-Shabaab iyo xoogagga taabacsan dawladda ayaa ku kala dhintay, kuwa badanna way ku dhaawacmeen iska hor imaadyadii dhawaan ka dhacay magaalooyinka koonfureed ee xagga xuduudda Kenya dhacsan.
Al Shabaab ayaa iyadu gacanta ku haysa inta badan gobolada koonfureed halkaas oo ay ka dhaqan galisay habdhaqan shareeco aan la isku waafaqsanayn.